Mgbe ndị njem nlegharị anya ga-aga mposi: F na-ewepụta ihe kacha mma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Mgbe ndị njem nlegharị anya ga-aga mposi: F na-ewepụta ihe kacha mma
Inweta njem nleta • Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ka anyị kwuo ụlọ mposi. Ihe nnochi njem nlegharị anya nke mba ụwa nke 2018 chọrọ iwepụ ihe kacha mma. Ee, enwere onyinye maka nke a.
Mgbe afọ ole na ole nyochachara njem nlegharị anya, onyinye a na MyTravelresearch.com bụ ebumnuche iji gosipụta ebe ndị njem nwere ebe mposi na-adị ọcha, kee ihe, ebe a na-achọ ihe ọ quụ aụ, ga-aga ogologo njem iji bulie onyogho ndị njem na ị nweta dollar njem. Chee echiche banyere ya: Ndị mmadụ kwụsịrị ịga, emesịa mefuo ego mgbe ha nọ ebe ahụ.
Dị ka onye na-agụ ihe, ịnwere ike ịhọrọ ụlọ mposi kachasị amasị gị nke ị na-eji dị ka ndị njem nleta.
O nwere ike ịbụ na mma obodo, ogige mba, ogige ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ ahịa, na ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ n'ihu ọha na họtel - ebe ọ bụla ndị njem nleta na-agakarị (na njedebe nke ụbọchị anyị niile bụ ndị njem nleta) .
Enwere ike ịhọpụta ụlọ mposi n'ụdị ndị a:
- Ọnọdụ kacha mma: Ebe ụlọ mposi nwere echiche ma eleghị anya weere ya dị ka ihe na-adọrọ mmasị na onwe ha
- Kachasị Mma: Architectural amamiihe na mposi, visual imewe, na creativity
- Quirkiest mposi Ahụmahụ: N'ihe metụtara ihe nketa nke obodo, ihe ọchị, ma ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama
- Ilelọ mposi kacha nweta: Na-akwado echiche nke njem maka mmadụ niile
- Ọganihu idebe ihe ọcha: Ebumnuche na mmepe akụ na ụba na-emepe emepe nke mere nnukwu nzọụkwụ na mposi ọha na eze
- Onye na-enye onyinye akụ na ụba kacha mmaN'ihi na mgbe ndị mmadụ na-akwụsị n'ụlọ mposi n'ebe ọ na-aga ma nọrọ na-emefu ihe karịrị penny
- Nlekọta anya na njem mposi
Onye ọ bụla nwere ike ịhọpụta nnukwu ụlọ mposi na mba ọ bụla. A nabatara nnyefe ugbu a site na ebe ndị njem na azụmahịa na-achọ ihichapụ ala na asọmpi ahụ.
O nweere onwe ịhọrọ, yana onlinedị ntanetị dị ebe a.
Ntinye mechie May 1, 2018.